maalinta jaceylka iyo diinta waxa ay ka qabto waa qalinkii (cumar shooli) | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
maalinta jaceylka iyo diinta waxa ay ka qabto waa qalinkii (cumar shooli)
Marwalba oo ay taariikhdu ku beegantahay 14 February waxa dunida gaalada looga dabaal dagaa maalin loogu magac daray St. Valentine (Valentine’s Day) ama Maalinta Jacaylka, laakin waxaa iswaydiin mudan waa kuma ninkaasi? Maxaana loogu dabaaldagaa maalintaas & magiciisa Valentine maxaa… keenay?
Valentine’s Day ama Maalinta Jacaylka waa xasuus ama xus la xuso Christian (Kirishtan) iyo Roman �kii hore. Marka aan isweydiinno kumuu ahaa Saint Valentine, muxuuna ugu xiran yahay xuskaas diimeed?
Maalintaas waxay bilaabatay xilligii boqortooyada Roman ka. Romain kii hore, 14th Ferbruary waxay u ahayd maalin ay weyneeyaan Juno. Juno waxay ahayd boqorad kamid ah Ilaahyada Romanka. Romans ka waxay kaloo u aqoonsanaayeen Juno ilaaha haweenka & guurka, maalinta ku xigta oo ah ,15th Feb, waxaa bilowda xuska Lupercalia oo isna ahaa w…
Maamulka boqortooyadii la oran jiray Emperor Claudius II Rome wuxuu gali jiray dagaallo dhiig badan uu ku daato. Boqor ka Claudius wuxuu ku dhibanaa in uu helo askar si uu u xoojiyo milatarigiisa iyo dagaalada uu galayo, .
wuxuu rumaysnaa in aynan nimanka Romans ka aynan rabin inay ka tagaan jeceelkooda & qoysaskooda, boqorkii Claudius wuxuu ka joojiyay boqortooyadii Rome guurkii oo dhan wuuxuna mamnuucay in la isguursado si ninku unaan u yeelan qof uu ku xirnaado.
الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله قد أبدلكم بهما خيراً …منهما: يوم الأضحى
ويوم الفطر” رواه أبو داود والنسائي
waxaa idiin diyaariyey cumar shooli oo ah ardey ka baxey jaamacadda azhar
ARAGTIDA GUURKA Rag iyo dumar badan oo is qaba ayaa iskula dhaqma in ay yihiin cadow